आजको राशिफल (२०७४ श्रावण २३ गते सोमबार/२०१७ अगस्ट ०७) – Complete Nepali News Portal
के हुदैं छ बालुवाटार बैठकमा ? होला त एउटै कम्युनिष्ट पार्टी ? (भिडियो)
अचम्मकै आवाज भएकी गायिका पुर्णिमा लामाले जव स्टुडियोमा रुदै आफ्नी आमालाई सम्झिएर एसो भनिन सबै चकित
आजको राशिफल (२०७४ श्रावण २३ गते सोमबार/२०१७ अगस्ट ०७)
August 6, 2017	1,496 Views
ज्योतिष कृष्णप्रसाद कोइराला
आज वि.सं. २०७४ श्रावण २३ गते सोमबार तदनुसार ई. सं. २०१७ अगस्ट ०७ तारिख
श्रावण शुक्ल पूर्णिमा , श्रवण नक्षत्र, मकर राशिको चन्द्रमा, आयुष्मान् योग, विष्टि (भद्रा) र बब करण
आजको चाडपर्व र उत्सव ः रक्षाबन्धन (राखी), पूर्णिमा व्रत, कुम्भेश्वर, गोसाइँकुण्ड, पशुपतिनाथ आदि तीर्थस्थलमा मेला, खण्डग्रास चन्द्रग्रहण, भागेश्वर जाँत (डडेलधुरा), दुधकुण्ड मेला (सोलुखुम्बु), मुक्तिनाथ यार्तोङ, हयग्रीवोत्पत्ति, मानस व्रत समाप्ति, ब्याँजानके गुँपुह्नि (नेवारी पर्व), श्री प्राणनाथ छत्रशाल मिलाप (कृष्णप्रणामी),
आजको मूहुर्त ः वास्तुमुहूर्त, दैलो राख्ने, पुराणश्रवण,
भोलिको चाडपर्व र उत्सव ः गाई जात्रा, सापारु (नेवारी पर्व), धनिष्ठा पञ्चक प्रारम्भ, द्विपुष्कर योग राती ११।४७ देखि मध्यरात्रीपछि ०५।१९ बजेसम्म,
भोलिको मूहुर्त ः रुद्राभिषेक(रुद्रीपूजा), अग्निवास(होमादि), वास्तुमुहूर्त,
आजका लागि अशुभ समय ः–
राहु काल ः बिहान ०७ः१० देखि ०८ः४९ सम्म
यमघण्ट ः बिहान १०ः२९ देखि १२ः०९ सम्म
गुलिक काल ः दिउँसो ०१ः४८ देखि ०३ः२८ सम्म
आजका लागि शुभकर्म प्रारम्भ गर्न उपयुक्त समय ः–
अमृत वारवेला ः बिहान ०५ः३० देखि ०७ः१० सम्म र साँझ ०५ः०८ देखि ०८ः०८ सम्म
लाभ वारवेला ः दिउँसो ०३ः२८ देखि ०५ः०८ सम्म
शुभ वारवेला ः बिहान ०८ः४९ देखि १०ः२९ सम्म
पञ्चाङ्ग, वारवेला, चाडपर्व र मुहूर्तको विस्तृत जानकारीका लागि यहाँ क्लिक् गर्नुहोस् ।
कामको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूसँग मित्रता बढ्नेछ । रुचिका विषयमा लगानी बढाउने समय छ । कला, साहित्य, मनोरञ्जन आदि क्षेत्रमा रुचि बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसायमा लाग्नेहरूलाई विशेष फाइदा होला । विभिन्न अवसरले पछ्याउनेछन् । शत्रुहरू किनारा लाग्नेछन् । चुनौती चिर्दै काम बनाउन सकिने छ । व्यापारलगायत आर्थिक लाभ हुने काममा राम्रै फाइदा हुनेछ । प्रतिस्पर्धामा पनि विजयी भइनेछ । तत्काल सामान्य उपलब्धि प्राप्त भए पनि भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने मौका छ । रोकिएका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ । संघर्ष गरेरै अधिकार स्थापित गर्न सकिने छ ।
शुभरङ्ग ः नीलो
शुभअङ्क ः ६
शुभदिशा ः दक्षिण
इष्टदेवता ः भोलेशङ्कर
अशुभ रङ्ग ः कलेजी
अशुभ अङ्क ः ५
अशुभ दिशा ः पूर्व
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ शं शनैश्चराय नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः २३
के गर्ने ः श्रमसाध्य र मिहिनेत गर्नुपर्ने काममा बलप्रयोग नगर्ने
के नगर्ने ः उदासीनता÷नैराश्यता
सानो प्रयासले भाग्यनिर्माण गर्न सकिने दिन छ । सँगीसाथी र सहयोगीको मद्दतले बिग्रनै लागेको काम पनि बन्नसक्छ । रोकिएका काम समेत सम्पादन हुनेछन् । नयाँ काम र जिम्मेवारी हात पार्ने मौका छ । प्रसिद्धि कमाउने र नाम राख्ने कुनै काममा मन जानेछ । गरेको कामले प्रशंसा पाउने छ । दीर्घकालिक फाइदाका लागि मिहिनेत र परिश्रम गर्ने समय छ । व्यापार–व्यवसायमा लाग्नेहरूले विशेष फाइदा लिन सक्नेछन् । रुचिका विषयमा लगानी बढाउन अनुकूल समय छ । सामाजिक उत्तरदायित्वको जिम्मेबारी लिनु पर्नेछ । सामाजिक र परोपकारी काममा श्रम तथा बुद्धिको उपयोग हुनेछ ।
शुभरङ्ग ः बैजनी वा पहेंलो
शुभअङ्क ः १
शुभदिशा ः पूर्व
इष्टदेवता ः विष्णु
अशुभ रङ्ग ः चम्किलो÷उज्यालो
अशुभ अङ्क ः ४
अशुभ दिशा ः उत्तर
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः १९
के गर्ने ः कुलधर्म र परम्पराको अनुसरण
के नगर्ने ः बृद्धबृद्धा र असहायको बेवास्ता
आजको प्रयत्न निष्फल जस्तै होला । काम बिग्रने भयले सताउला । लगानी, दौडधुप, श्रम र प्रयत्नको उचित मूल्य नपाइने समय छ । न्यून उपलब्धिमा चित्त बुझाउनुपर्ने समय छ । नयाँ काममा हात हाल्न केही समय पर्खंदा राम्रो हुनेछ । गरी आएको कामलाई भने निरन्तरता दिन सकिने छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन्, सचेत रहनुहोला । महत्वाकाङ्क्षी योजना गोप्य राखेर अघि बढ्दा फाइदा हुनेछ । पशुधन र जमिनबाट सामान्य लाभ उठाउन सकिने छ । विगतका निर्णयले काम बिग्रन सक्छ । मान्यजनको सुझावप्रति विश्वास नलाग्न सक्छ । बेसुरमा वचन दिने बानीले दुःख पाइनेछ ।
शुभरङ्ग ः ध्वाँसे
शुभअङ्क ः ४
शुभदिशा ः उत्तर
इष्टदेवता ः सङ्कटा देवी
अशुभ रङ्ग ः हरियो
अशुभ अङ्क ः ३
अशुभ दिशा ः पश्चिम
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ सङ्कटाभगवत्यैै नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः १०
के गर्ने ः नैराश्यभाव त्याग गर्ने
के नगर्ने ः तीव्रगति र हडबड
चन्द्रमा सातौं भावमा भए पनि त्यत्ति अनुकूल दिन छैन । मनका इच्छा र आकाङ्क्षामा व्यवधान सिर्जना हुनेछ । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहने छ, तर पनि मनमा निराशा र वैराग्यका भावना मँडारिन सक्छन् । पठनपाठनमा रुचि हुँदैन । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका त छ, तर मिहिनेत र परिश्रममा कमी आउनाले पूर्ण हुँदैन । यात्रामा नमज्जा हुनेछ । दाम्पत्य जीवन वा प्रेमसम्बन्धमा चिसोपन देखिने छ । मानसिक खिन्नता, चिन्ता÷शङ्का र छटपटीले कष्ट हुनसक्छ । तर यथासम्भव समय र परिस्थितिलाई पर्गेलेर काम गर्न सके प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिने बेला छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ ।
शुभरङ्ग ः सुन्तले
शुभअङ्क ः ३
शुभदिशा ः पश्चिम
इष्टदेवता ः विष्णुलक्ष्मी
अशुभ रङ्ग ः पहेंलो
अशुभ अङ्क ः २
अशुभ दिशा ः दक्षिण
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ शुं शुक्राय नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः ११
के गर्ने ः घरमा आवश्यक वस्तुको किनमेल
के नगर्ने ः परिवारको बेवास्ता
प्रयत्न गर्दा सजिलै फाइदा लिन सकिने छ । शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्ने समय छ । मुद्दा–मामिलामा पनि विजयी भइनेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ सामान्य फाइदाको योग छ । अधिकारका लागि केही संघर्ष पनि हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरे पनि अरूको हातमा गइसकेको अवसर जोगाउन सकिने छ । सहयोगीहरू जुट्नाले रोकिएका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन् । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनसक्छ । एउटै कामबाट दोहोरो लाभ मिल्नेछ । काम बन्नाले निकै उत्साहित भइनेछ । गरेका कामबाट धेरैलाई फाइदा पुग्न सक्छ । विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ ।
शुभरङ्ग ः छिर्केमिर्के बुट्टे
शुभअङ्क ः २
इष्टदेवता ः गणेश
अशुभ रङ्ग ः सुन्तले÷गुलाबी
अशुभ अङ्क ः १
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ बुं बुधाय नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः ०८
के गर्ने ः खानपानमा नियन्त्रण
के नगर्ने ः आवेग, घमण्ड र क्रोध
सुखद समाचारले अझ उत्साह बढ्नेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ मिल्नेछ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । मनग्ये आम्दानी हुनेछ । विभिन्न भौतिक साधन जुट्न सक्छन् । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । बोलीकै भरमा विशेष काम सम्पादन हुनसक्छ, क्रियाशील रहनुहोला । रचनात्मक काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । विगतको सफलताले थप काम गर्न हौसला मिल्नेछ । प्रेमी÷प्रेमिकाका बीचमा सुमधुरता र सामीप्यता प्राप्त हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउनेछ । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ ।
शुभरङ्ग ः गाढा हरियो
शुभअङ्क ः ५
इष्टदेवता ः सूर्यदेव
अशुभ रङ्ग ः कालो
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ घृणि सूर्याय नमः
न्यूनतम जापसङ्ख्या ः ०७
के गर्ने ः छोराछोरीको उन्नति÷प्रगतिको जानकारी लिने
के नगर्ने ः अल्छी र अकर्मण्यता
खराब समय छ । परिस्थितिअनुसार चल्न नसक्ता अलि दुःख पाइनेछ । महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ भने केही समय पर्खनुहोला । आफैंले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्न धौधौ पर्नेछ । आफन्तका बीचमा खटपट, चिन्ता र शङ्का उब्जने छ । परिवारभित्र मनोमालिन्य बढ्ने सङ्केत छ । मान्यजनको सुझावलाई नमान्नाले काम बिग्रन सक्छ । आमा वा घरकी बृद्ध स्त्रीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिन सक्छ । समयमा होस नपुग्नाले बन्नै लागेको काम बिग्रन सक्छ । फाइदाका पछि लाग्दा साथीभाइ टाढिन सक्छन् । छर–छिमेकमा पनि असमझदारी बढ्न सक्छ । घरखर्चको मात्रा बढ्नेछ ।
शुभरङ्ग ः गाढा रातो
शुभअङ्क ः ८
इष्टदेवता ः शिवर्पावती
अशुभ रङ्ग ः गाढा नीलो
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ सों सोमाय नम
के गर्ने ः घरपरिवारका कुरालाई वेवास्ता नगर्ने
के नगर्ने ः गोपनीयता भङ्ग
समयको गतिलाई अनुसरण गर्ने आँट र हिम्मत पलाउने छ । नयाँ भौतिक साधन जोहो गर्ने वातावरण बन्नेछ । अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग पनि जुझारु भई काम गरिने छ । बन्धुबान्धव र गुरुजनको सहयोग र बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । प्रतिस्पर्धाले पुरुषार्थी काम गर्ने हिम्मत प्रदान गर्नेछ । उद्योग तथा बन्दव्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने छ । शुभचिन्तकहरूले पूर्ण समर्थन प्रदान गर्नेछन् । पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिने छ । घरायससी र दाम्पत्य सम्बन्धमा सुमधुरता प्राप्ति हुनेछ । कृषि, पशुपालन एवं श्रमसाध्य कामबाट लाभ हुनेछ । प्रतिस्पर्धाबाट लाभ मिल्नेछ ।
शुभअङ्क ः ७
इष्टदेवता ः हनुमान्
अशुभ रङ्ग ः गुलाबी वा सिन्दूरे
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ ऋद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्मङ्गलमूर्तये नमः
के गर्ने ः बन्धुबान्धव र दाजुभाइका सल्लाह मान्ने
के नगर्ने ः साथीभाइको बेवास्ता
धनस्थानमा रहेको चन्द्रमा बलियो छ । त्यसैले आज अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउन सकिने समय छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । राम्रै फाइदाको योग छ । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । कीर्तिमानी काम गर्ने समय छ । आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिने छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ । सामाजिक दायित्व बढ्नेछ । पैत्रिक सम्पत्तिबाट लाभ मिल्नेछ । व्यापारमा पनि प्रशस्त फाइदा हुनेछ ।
शुभरङ्ग ः सेतो वा उज्यालो
इष्टदेवता ः लक्ष्मी माता
अशुभ अङ्क ः ९
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ धनप्रदाय कुबेराय नमः
के गर्ने ः अल्पकालिक प्रतिफल आउने काममा लगानी
के नगर्ने ः बोलीवचनमा कडापन
मनमा उत्साह, उमङ्ग र चञ्चलता देखिने छ । इच्छाशक्ति बढ्नुका साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुनसक्छ । परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने छ । विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइनेछ । स्वादिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ । परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिएला । कामबाट पनि फुर्सद पाइनेछ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन् । आक्षेप लगाउनेहरू निष्क्रिय हुनेछन् भने सहयोगीहरूको साथ पाइने छ । जस्तोसुकै चुनौती पन्छाउन सकिने छ । समस्या र बाध्यतामा अलमलिंदा मन रमाउने छ । यत्नपूर्वक गरेको कामबाट सोचेको परिणाम दिलाउने छ ।
शुभरङ्ग ः हलुका रातो
अशुभ अङ्क ः ८
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ गं गणपतये नमः
के गर्ने ः मन उत्ताउलो नबनाउने
के नगर्ने ः हतारमा निर्णय
चन्द्रमाको प्रभाव कमजोर छ, तर आफ्नो बुद्धि र विवेकको प्रयोग गर्न सके आजको दिनलाई सकारात्मक बनाउने समय छ । टाढाका नातागोता वा परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । प्रयत्न गर्दा टाढाको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ । त्यस्तै यात्राका क्रममा अपनाएको सचेतताले ठूलो नोक्सानी हुनबाट जोगिने छ । केही उपहार प्राप्त हुने देखिन्छ । खर्च लागे पनि दिगो फाइदा हुने काममा लगानी गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । चुनौतीहरू पन्छाउँदै रोकिएका काम बनाउन सकिने छ । धैर्यले काम लिने समय छ । छरछिमेकमा केही असमझदारी बढ्ने योग देखिए पनि प्रतिस्पर्धाबाट फाइदा उठाउन सकिने छ ।
शुभरङ्ग ः गाढा पहेंलो वा बुट्टे
इष्टदेवता ः कालभैरव
अशुभ रङ्ग ः हरियो÷चम्किलो
अशुभ अङ्क ः ७
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ कें केतवे नमः
के गर्ने ः दीर्घकालीन प्रतिफल आउने पक्षको लगानी
के नगर्ने ः याचकको अपमान
सोचेभन्दा राम्रै फाइदा हुनेछ । पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति हुनेछ । लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिने छ । साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ । नयाँ जिम्मेवारी पाइएला । श्रमको उचित मूल्याङ्कन हुनेछ । पितृधनको उपयोगबाट विशेष फाइदा होला । सोचेभन्दा राम्रै लाभ हुनेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला । दिन मनोरञ्जनपूर्ण रहनेछ । पठनपाठनमा प्रगति हुनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । व्यापार–व्यवसायमा लाभ हुनेछ । व्यवसाय विस्तारका लागि यात्रा पनि हुनसक्छ ।
शुभरङ्ग ः सेतो वा घिउरङ
इष्टदेवता ः शिवजी
अशुभ रङ्ग ः घिउरङ्ग÷क्रिम
अशुभ अङ्क ः ६
कार्यसिद्धि मन्त्र ः ॐ नमः शिवाय
के गर्ने ः रचनात्मकता र सिर्जनात्मकतामा जोड दिने
के नगर्ने ः अनावश्यक नियन्त्रण र निर्देशन
(द्रष्टव्य ः आज उल्लेख गरिएको राशिफल असल वा खराब जेजस्तो भए पनि तपाईंले आफ्नो कामप्रति निष्ठा जनाउनु पर्दछ, कर्तव्यपालना गर्नु पर्दछ र परोपकारी÷सामाजिक भावना राख्नु पर्दछ, यसो गर्नुभएमा अनिष्ट नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ र राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभफल प्राप्त हुनेछ ।)
ज्योतिष कृष्णप्रसाद कोइरालाद्रारा लिखित राशिफल र साथमा बिबिध जानकारीको सम्पर्क नम्बर ९८५२०५९७६४/९८१४३४८१११ www.jyotishsathi.com
आजको राशिफल (२०७४ फाल्गुन ०६ गते/२०१८ फेब्रुवरी १८)
वि.सं. २०७४ फाल्गुन ०५ गते शनिबार तदनुसार ई. सं. २०१८ फेब्रुवरी १७ तारिख,
देवी माता श्रीसन्तोषीले सबैको रक्षा गरुन, शुक्रबार ४ फाल्गुन/ फेब्रुवरी १६ को राशिफल
वि.सं. २०७४ फाल्गुन ०३ गते बिहीबार तदनुसार ई. सं. २०१८ फेब्रुवरी १५ तारिख,
आजको राशिफल (२०७४ फाल्गुन ०२ गते/२०१८ फेब्रुवरी १४)
२०७४ फाल्गुन महिनाको राशिफल – चारवटा राशिको भाग्योदय (Monthly Horoscope)
March 3, 2017	188,187
April 28, 2017	115,491
February 26, 2017	113,671
January 9, 2017	112,586
April 26, 2017	104,494
March 24, 2017	103,864
March 21, 2017	103,409
April 19, 2017	96,237
January 24, 2017	94,032
April 17, 2017	90,176